Nabadoon Caan ah oo Goordhaw lagu dilay Magaalada Baardheere |
Nabadoon Caan ah oo Goordhaw lagu dilay Magaalada Baardheere
Wararka ka imaanaya Magaalada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in kooxo hubeesan ay goordhaw xaafad katirsan Magaaladaasi ay ku dileen mid kamid ah nabadoona ugu caansan ee halkaasi dagnaa.
Dhalinyaro bistoolado ku hubeesan ayaa la sheegay in xaafad katirsan Degmada Baardheere ay ku dileen Nabadoon caan ah oo Magaciisa lagu sheegay Maxamed Dheere, waxaana raga dilka geestay ay durba goobta isaga baxsadeen.
Qof ku sugan Baardheere oo diiday in magaciisa la adeegsado ayaa sheegay in dilka loo geestay nabadoonka ay cabsi badan ka abuurtay Magaalada Baardheere, waxa uuna intaa raaciyay in raga dilka geestay ay Nabadoonka rasaas badan huwiyeen kadibna ay carareen.
Xaalada kacsanaan iyo cabsi badan ayaa ka jirta Magaalada Baardheere oo lasoo sheegayo in ay kusii dhawaanayaan Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo Degmadaasi dhoor jiho ka weeraraya.
Dagaalyahano hubeesan oo katirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa gudaha iyo daafaha Magalaada lagu arkayaa iyaga oo gaadiid dagaal adeegsanaya, waxaana inta badan Baardheere isaga qaxay dadkii shacabka ahaa ee kunoolaa.
Ciidamada Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa kaabiga ku haya Baardheere waxaaa saacadihii lasoo dhaafay ciidamada la wareegeen Deegaano dhoor ah oo hoostaga Magaalada Baardheere.